Atọ-usoro akpụkpọ ụkwụ elu vamp eme igwe - China Taizhou Boding Machinery
Computer ewepụghị-akpa igwe
Shoes elu vamp Ndinam igwe
Atọ-usoro akpụkpọ ụkwụ elu vamp Ndinam igwe
DZ352S bụ otu ajụjụ atọ usoro na otu elu-ọkwá ala izute erughị ala chọrọ ka ele mmadụ anya n'ihu knitting. Mezuo nke zuru okè na-ahụ ala nke ákwà. Onwem na infrared ịchọputa mkpu usoro, nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na-efu na oti mkpu ma agịga hit. Tụgharịa azụ nkwonkwo-achịkwa site n'itinyekwu moto, dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na arụpụtaghị nakwa dị ka izere eyi nke e ji ebu ihe okporo ígwè. Na dijitalụ technology, mezuo ihe nakawa etu esi nke nyefe, pointel, Tuck, intarsi ...
DZ352S bụ otu ajụjụ atọ usoro na otu elu-ọkwá ala izute erughị ala chọrọ ka ele mmadụ anya n'ihu knitting. Mezuo nke zuru okè na-ahụ ala nke ákwà. Onwem na infrared ịchọputa mkpu usoro, nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na-efu na oti mkpu ma agịga hit. Tụgharịa azụ nkwonkwo-achịkwa site n'itinyekwu moto, dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na arụpụtaghị nakwa dị ka izere eyi nke e ji ebu ihe okporo ígwè.
Na dijitalụ technology, mezuo ihe nakawa etu esi nke nyefe, pointel, Tuck, intarsia, Jacquard, full ndudu, o udi, zoro ezo udi na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ akpa ọrụ. Adabara ala na-akpa iche iche nke ọhụrụ akpụkpọ ụkwụ paerns mere nke diffenent iche iche nke polyster yarns.
nlele 5 / 7G 12G 14G 16G
Agịga / Obosara 364needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Main Function Ikpa efe isi otu ma ọ bụ abụọ Jersey, full ndudu, oge ufodu, Jacquard, intarsia, Gịnị, pointel ákwà.
knitting System Single ajụjụ abụọ na usoro ma ọ bụ atọ na usoro, na dijitalụ technology, mezuo ihe nakawa etu esi nke nyefe, pointel, Tuck, intarsia, Jacquard, abụọ jersery Araba, appaent udi, zoro ezo udi na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ akpa ọrụ.
knitting Speed Max akpa ọsọ 1.6M / S.32 ọsọ ngalaba achịkwa servo moto.
Sitch njupụta 64 njupụta nhọrọ nso 0-650 achịkwa site n'itinyekwu moto, eletriki mma ịgbanwe technology.
Dynamic stitch Deviced site ike stitch technology, nweta iche iche stitches na otu N'ezie na dịgasị iche iche njupụta otu N'ezie mma kniing arụmọrụ na dịgasị iche iche.
ọgịrịga nyefe Free transter abụọ ụzọ n'etiti n'ihu na azụ agịga na n'otu oge ahụ na dịghị mmachi site ajụjụ ije. Nyefee na ikpa efe n'otu n'otu.
Sinker N'itinyekwu moto akara na mgbanwe sinker iji nweta ihe multiple shaping na-ebuwanye ibu ọrụ.
nhọrọ ndudu 8 ngalaba nhọrọ ndudu
Single mbukota Motor drive atụ egwu, nweta 1/2 ma ọ bụ 1/4 agịga erughị ala mgbe ọ bụla ọnọdụ. max 2 sentimita asatọ otu akụkụ adabara 9G, 12G, 14G, na 16G igwe.
Tụgharịa Back Joint (Nhọrọ) Tụgharịa azụ nkwonkwo-achịkwa site n'itinyekwu moto dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na arụpụtaghị dị ka izere eyi nke e ji ebu ihe okporo ígwè.
ala Device Up-ọkwá ala nwere ike fuifil zuru okè na-ahụ ala nke ákwà na erughị ala chọrọ ka portionable knitting.
Yarn ala Positive yarn ala kpomkwem ịchịkwa te erughị ala nke yarn ka gurantee na ákwà mma.
Yarn ụgbọelu 2 8 yarn ebu deviced on 4 abụọ n'akụkụ edu okporo ígwè.
Safety Full igwe cover iji belata noice ad ájá. Cover mmetụta, ngwa ngwa button, ike anya na ngwaọrụ na-egosi na-ekwe nkwa na nchekwa.
Auto Kwụsị Machine na akpaaka na-akwụsị mgbe yarn ezumike, yarn nkwonkwo rapaara, ákwà mpịakọta n'ime, agịga hit, bufee, usoro ihe omume njehie na usoro ọgwụgwụ na-eme.
agịga Detector Ịchọpụta sere n'elu agịga izere agịga hit. Nke a deviced na smart omume na infrared mmetụta naanị ịchọpụta-akpa ebe izere enweteghi egwu.
Computer System LCD ileba anya, ihuenyo mmetụ, onyeōzi interface, USB na net imput, 1GB RAM maka nnukwu file nchekwa.Nyochaa:-arụ ọrụ data, Stitch data ngwa anya na mgbanwe n'oge mmepụta maka adaba ọrụ.
Program usoro na igwe kọmputa usoro mfe imelite ma na-akwado CNT / HCD / OOO ụkpụrụ file.
Multiple usoro asụsụ ọrụ na-agụnye Chinese, English na n'asụsụ ndị ọzọ.
File Input USB na net
Power Off Memory Deviced elu CMOS technology, mgbe ike anya-eme na-akpa data na faịlụ a na-echekwa maka Malitegharịa ekwentị knitting.
net Connection High ọsọ (Ethernet), kacha jikọọ 254 ígwè na-file input iji mezuo monior na data òkè.
Dimension L * W * H 3360 * 940 * 2010mm
ibu (Ugboro abụọ usoro) Net arọ: 1270kg; (Three usoro) Net arọ: 1300kg
Previous: Abụọ-usoro kọmputa ewepụghị-akpa igwe
Automic Akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
CPU Shoes Upper Machine
Ịcha Shoes Machine
Eva Akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
Eva Akpụkpọ ụkwụ eriri Ime Machine
Ofụri Esịt Automatic akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
High-heeled Shoes Ime Machine
Kpu Shoes Upper Ime Machine
Kpu Shoes Vamp Nkedo Machine
Ladies Akpụkpọ ụkwụ Machine
Ladies Shoes Ime Machine
Akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ Ime Machines
akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ naanị ḷkwa Akwa Machine
Nkedo Akpụkpọ ụkwụ n'ịkpụzi Machine
New Akpụkpọ ụkwụ n'ịkpụzi Machine
ịkwanyere Akpụkpọ ụkwụ eriri Ime Machine
n'ịkpụzi eme Machine N'ihi Shoes
n'ịkpụzi akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ Cover Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ Ewepụghị Kpaa Machine
akpụkpọ ụkwụ Insole Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ insoles Machine
Akpụkpọ ụkwụ lining attaching Machine
akpụkpọ ụkwụ Machine Price
Akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
akpụkpọ ụkwụ Ime Machines
Akpụkpọ ụkwụ Ime igweoduakwa
akpụkpọ ụkwụ Polish Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ igweoduakwa
akpụkpọ ụkwụ naanị Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ eriri Ime Machine
akpụkpọ ụkwụ Upper Cutting Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Embossing Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Akpụkpọ anụ Cutting Machine
akpụkpọ ụkwụ Upper Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper ịgbazigharị Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper igweoduakwa
Akpụkpọ ụkwụ Upper n'ịkpụzi Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Vamp Ime Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Vamp ịgbado ọkụ Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper-adịgide adịgide Machine
Akpụkpọ ụkwụ Vamp n'ịkpụzi Machine
Shoes Hammering Machine
Shoes Ime Machine
Shoes Ime Machine Price
Shoes Upper Ime Machine
Shoes Upper Vamp Ime Machine
Slide Shoes Upper welder ịgbado ọkụ
naanị Ịcha Akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
Special Industrial akpụkpọ ụkwụ Machine
Sport akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
Sport Shoes Ime Machine
zọ Machine N'ihi Shoes
Synthetics Akpụkpọ ụkwụ Akpụkpọ anụ Cutting Machine
Three-System Shoes Upper Vamp Ime Machine
Upper Nkedo Akpụkpọ ụkwụ Ime Machine
Upper Vamp Ime Machine
Vamp Crimping Nkedo Machine
Vamp Ime Machine
Abụọ-usoro kọmputa ewepụghị-akpa igwe
Single-usoro kọmputa ewepụghị-akpa igwe
Nye Anyị A Tie mkpu
Nweta Email Mmelite
Okwu: No.189, Jiangxin Road, Binhai Jiju District, Taizhou City, Zhejiang Province
Dingzhen kọmputa Ewepụghị Knitting Machi ...
Dingzhen kọmputa Jacquard Machine utari ...
Dingzhen Single-System kọmputa Ewepụghị ...
The Ford logo na Bronco aha bụ ihe onwunwe nke Ford Motor Company. Classic Ford Broncos na-adịghị metụtara na Ford Motor Company.